के हातको क्रिया गरेर भएपनि वीर्य बाहिर नफाल्नु घातक हो ? • raradiodarpan.com
के हातको क्रिया गरेर भएपनि वीर्य बाहिर नफाल्नु घातक हो ?
स्वास्थ्य व्युरो ।
वीर्य सधैं हाम्रो शरीरमा बनाइन्छ र यसलाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक छ।
तर यदि हामीले आफ्नो वीर्य बाहिर निकालेनौं भने यो हाम्रो शरीरको लागि धेरै हानिकारक हुन सक्छ। यसलाई वीर्य वेग पनि भनिन्छ। धेरैले शारीरिक सम्पर्कका क्रममा वीर्य निकासी गर्छन् भने धेरैले हस्तको क्रियाबाट वीर्य निकाल्छन् ।
तर जसले यसो गर्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिको रातको निन्द्राको समयमा आफै वीर्य बाहिर निस्कन्छ ।
सबैभन्दा पहिले हामी तपाईलाई यो वीर्य वेग के हो भनौं ? वीर्य वेग भनेको हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुने रस हो जुन २४ घण्टासम्म बनिरहन्छ ।
यो हाम्रो शरीरमा पिसाब बनाउने तरिका जस्तै हो, जसलाई बन्नबाट रोक्न सकिदैन, न त कसैले रोक्ने प्रयास नै गर्नु पर्छ ।
जब पुरुषले आफ्नो वीर्य बाहिर निकाल्दैनन् यसले उसको मूत्राशयलाई असर गर्छ। यसले उनीहरूको मूत्राशयमा थप तनाव दिन्छ र यसले धेरै दुखाइ पनि निम्त्याउँछ।
तपाईलाई भनौं कि हाम्रो पिसाब र वीर्यबाट निस्कने नली एउटै हुन्छ । यदि तपाईंले आफ्नो वीर्य बाहिर निस्कनबाट रोक्नुभयो भने, यसले तपाईंको मूत्राशयको नलीलाई पनि असर गर्छ। यसले तपाइँको मूत्राशयमा दुखाइ निम्त्याउँछ।
पुरुषको प्रजनन क्षमता पूर्णतया उनीहरूको राम्रो र स्वस्थ शुक्रकीटमा निर्भर गर्दछ। सबैलाई थाहा छ । यी शुक्राणुहरू हाम्रो वीर्यमा पाइन्छ। हाम्रो वीर्यसँगै यी शुक्रकीटहरू पनि हाम्रो शरीरबाट बाहिर निस्कन्छन् र यसका कारण महिलाहरू गर्भवती हुन्छन्।
तर यदि हामीले आफ्नो वीर्य रोक्ने प्रयास गर्यौं भने हाम्रो शरीरमा शुक्रकीटको कमी हुन सक्छ र यसो गर्नु निकै हानिकारक हुन्छ किनभने त्यसो गर्दा पुरुषको प्रजनन क्षमतामा नराम्रो असर पर्न सक्छ ।
जहाँ हाम्रो वीर्य बन्छ, त्यसको ठीक माथि मिर्गौला हुन्छ। हाम्रो शरीरको हरेक अंग एक अर्कामा निर्भर छ। जब मानिसले वीर्यको प्रवाह रोक्छ, यसले हाम्रो मृगौलामा पनि दबाब पर्न सक्छ र त्यसो गर्दा मिर्गौला सुन्निने पनि हुन्छ ।
वीर्य रोकेर मिर्गौलामा पर्ने दबाब निकै हानिकारक हुन्छ र समस्या पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । यसले ठूलो रोग पनि निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले वीर्यको प्रवाह रोक्नु हुँदैन।
गोप्य अंगमा दुखाइ
जब कुनै व्यक्ति शारीरिक सम्पर्क गर्छ, त्यो समयमा उ आवेगमा हुन्छ र यसले व्यक्तिको गोप्य अंगमा तनाव उत्पन्न हुन्छ ।
जब वीर्य निस्कन्छ, यो तनाव हट्छ। तर यदि तपाईंले आफ्नो वीर्य बाहिर निस्कन रोक्यो भने, यसले तपाईंको गोप्य अंगमा पीडा हुन सक्छ।
यद्यपि, तपाइँ एकै समयमा यो दुखाइ महसुस नगर्न सक्नुहुन्छ, तर पछि तपाइँ यसको पीडा महसुस गर्नुहुनेछ। धेरैले शारीरिक सम्पर्क लामो हुने भएकाले वीर्य निस्कन रोक्छन् । तर त्यसो गर्नु घातक हुन सक्छ।
यसबारे शारीरिक सम्पर्क विशेषज्ञ डा. सञ्जय देशपाण्डे भन्छन्, वीर्यको वेग रोक्नु खतरनाक हुन सक्छ। यदि तपाइँ शारीरिक सम्पर्कको समयमा यो गर्दै हुनुहुन्छ भने, त झनै यसले पुरुष र महिला पार्टनरलाई सन्तुष्ट गर्दैन। कुनै पनि दम्पतीले गर्भावस्थाबाट बच्न यसो गर्छन् तर यो खतरनाक हुन्छ।
मानसिक र यौन सन्तुष्टि
डा. देशपाण्डेका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूलाई हातको क्रियाबाट वीर्य निकाल्ने तथाकथित नराम्रा प्रभावहरूबाट बच्न प्रायः भनिन्छ, तर हातको क्रियाबाट वीर्य बाहिर निकाल्नु हानिकारक होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
वीर्य बाहिर निस्किदा पुरुषलाई मानसिक र शारीरिक सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने कुरा तपाईंले ध्यानमा राख्नुपर्छ।
कहिलेकाहीँ यदि स्खलन रोकियो वा टालियो भने, यसले अण्डकोष दुखाइ अर्थात ट्रिगर गर्न सक्छ। यो हरेक मानिसको जीवनमा चाहिने जानकारी आफूले पढिसकेपछि सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।